Maonero, maonero, kudzvanya… ndinoshamisika zvakanyanya kuti sei tichiri kuyera nekushambadza zvichibva pamametric aya. MassiveImpact nharembozha yekushambadzira inosvika vanopfuura 1 bhiriyoni vanoshandisa nharembozha kubva munyika 190 uye havadaro. Ivo vanoshandisa CPA, kana mutengo wechiito, kuona kwavo kushambadzira mitengo. Ndizvozvo ... iwe unobhadhara chete kana paine shanduko chaiyo! Izvi zvinoreva kuti kudzoka kwako mukudyara kunovimbiswa. MassiveImpact inopa 2-tier nhare yekushambadzira modhi, uchishandisa